Kedu ihe a ga-eburu n'uche mgbe ị na-ewu njikọ azụmazụ dị mkpa maka ịrụ ọrụ SEO?
Ọ dịghị mkpa ikwupụta na azụlinks dị mkpa nke ụlọ maka SEO n'ụzọ ziri ezi nwere ihe nzuzo zoro ezo site na onye ọ bụla nwe ụlọ ọrụ weebụ na onye nwe saịtị. Nke ahụ bụ eziokwu, tumadi n'ihi na usoro dum nke ịmepụta ihe dị mkpa backlinks na-agaghị emerụ gị ọkwa nwere ọtụtụ nzọụkwụ na n'akụkụ. Ọ na-esikarị ọtụtụ n'ime anyị ike iche echiche mgbe niile na-ezere ihe ndị na-emebi ihe. Nke a bụ ihe dị n'okpuru ebe m ga-egosi gị ụfọdụ n'ime nsogbu ndị kachasị mma gbasara ụlọ njikọ. Mara ihe a ga-ezere na ihe ọ bụla - ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala echekwara ngwa ngwa na ị chọpụta ha na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog. Ekwuru m na ọ bụla n'ime ihe ndị na-esonụ nwere ike ịgbanye ọbụna azụmazụ azụ gị kachasị mma n'ime ihe na-abaghị uru nke junk - fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge. Kedu ihe ọzọ - ọ bụrụ na ọ dị oke njedebe, nanị otu njikọ "egbu egbu" nwere ike imetụta oke ọrụ SEO ogologo oge na-abaghị uru.
Ihe Nlehie Anya
Ọ ga-aka mma ka ọ dịkarịa ala ele anya ebe a. Echefula ihe ndị a doro anya - naanị jụọ onwe gị ma ọ bụrụ na ị nwere ihe niile dị na ya, a gaghị ejikọta weebụsaịtị ma ọ bụ blog gị na:
weebụsaịtị ma ọ bụ blọọgụ ọ bụla na-enwe aha ọjọọ (ịghara ịkpọ ndị amachibido iwu na Google).
isi mmalite niche, ma ọ bụ ebe ọ bụla nwere mmekọrita na ụlọ ọrụ kachasị mma, dịka ịkwa iko, ịgba chaa chaa, ma ọ bụ ọgwụ;
isi mmalite ndị ọzọ na-achọ dịka weebụsaịtị, blọọgụ, ma ọ bụ forums ma ọ bụ nwee ntanetịime azụmazụ dị na ha na profaịlụ njikọ ha, ma ọ bụ na-enye ha maka ire ere na / ma ọ bụ mgbanwe.
Ihe niile kwesịrị ịkọwapụta onwe gị n'ebe ahụ, dịka itinye n'ọrụ maka nhọrọ ọ bụla a kpọtụrụ aha, ọ ga-abụ na ị ga-emerụ nchịkọta ọkwa gị ugbu a, karịa inwe obi ụtọ ọ bụla maka atụmatụ gị na SEO na ọnụ ọgụgụ. Ozugbo anyị mere ọbụna ihe ndị doro anya na-apụtaghị ìhè, n'okpuru, m ga-eme ka mmadụ pụta ìhè na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọta ya. Mgbe ọ na-abịa n'ịzụlite azụmazụ azụ dị mkpa, ebe a bụ ihe na-egbukarị egwuregwu ahụ:
Ihe Odide Na-ezighị ezi
ma ghara iji ha mee ihe na agba. Enwere m ike ikwu na ị ga-abanyekwu n'ime isiokwu ahụ, n'ihi na ọ bụ nanị arịlịka azụmahịa siri ike nke na-ele anya na-eme ka ị gbanwee. Eziokwu ahụ jọgburu onwe ya bụ na isi ihe na-ezighị ezi ma ọ bụ ọbụna akụkụ ezighi ezi nke na-ezighị ezi nwere ike ime ka ị gbanwee akara azụmazụ dị mma na nke dị mkpa na ihe mere eji dozie ogo,.
Mmetụta na-ezighi ezi nke DoFollow / NoFollow Attributes
Dịka onye gara aga, a ga-achọ okwu a ịmụtakwu ihe omimi. N'ezie, naanị backlinks DoFollow nwere ike izute mkpa nke SEO n'ọtụtụ. N'otu oge ahụ - ọ bụrụ na ị na-emegharị ma ọ bụ dịtụ ntakịrị ka ọ gafere ha - ihe nile ga-esikarịrị ka ọ ga-ejedebe na ọ ga-esi na ya pụta.
Ọganihu Dị Mkpa
Ka anyị lee ya anya - ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnweta mmeri ọma na ịchọta ọtụtụ ebe dị mma na ndị a pụrụ ịdabere na ya. njikọ ya na, ịkwesịrị ịgbapụ - iji jiri ohere ọ bụla mee ihe n'ime ọtụtụ awa ma ọ bụ maka abalị. Na mmụba ọ bụla ọ bụla - ma ọ bụ na njikọ njikọ ma ọ bụ ọtụtụ - abụghị n'ezie ihe a ga-eto. Cheta, ime njikọ dị mkpa nke ga-enyere gị aka na njedebe ha kachasị mma na SEO - bụ maka nhazi Source . Echela oge ịjụ onwe gị ọzọ: Ihe ọ bụla na-ele anya n'ụzọ zuru ezu? Ị nwere oge zuru ezu iji bulie isi mmalite ndị ahụ? Ị kwenyesiri ike na ihe niile gbasara backlinks dị na ebe ma mee naanị maka nzube doro anya?